Fiahiana ara-tsosialy ao Rosia: Ny rafitra, ny tahan'ny sy ny soa nanazava - mpila ravinahitra Mpitarika ny Rosia - Mpisolovava rosiana
Ianao no afaka ho an’ny fiahiana ara-tsosialy ao Rosia. Mianatra momba ny rosiana rafitra fiahiana ara-tsosialy sy ny fandraisana anjara, plus how to get a rosiana laharana fiahiana ara-tsosialy ary milaza fiahiana ara-tsosialy ao Rosia. Ny Rosia rafitra fiahiana ara-tsosialy dia ny andraikitry ny fanjakana, indrindra indrindra overseen avy amin’ny Ministeran’ny Asa sy ny Fiarovana ara-Tsosialy. Amin’ny toe-javatra sasany, ireo mpiasa vahiny izay tsy maharitra na maharitra hipetraka dia mendrika ny hahazo ny tombontsoa azo avy amin’ny karama avy amin’ny alalan’ny fiahiana ara-tsosialy ao Rosia, raha toa izy ireo efa nandoa ny vola ilaina manokana ho volam-panjakana. Samy vola dia tohanan’ny tsy maintsy rosiana amin’ny fiahiana ara-tsosialy fandoavam-bola izay nakòn avy amin’ny lehibe-karama, na dia maro aza ny fandaniana sy ny tombontsoa mety ho afa-miala amin’ny ny kajy. Azonao atao ihany koa ny manao fanampiny an-tsitrapo ny fandraisana anjara raha toa ka te-hamonjy ho an’ny fisotroan-dronono ao Rosia na drafitra ho an’ny fisotroan-dronono tsara kokoa ao Rosia. Ireo mpiasa vahiny ihany no mendrika ny ho vola mponina rosiana hetra sy ny ara-tsosialy ny fiampangana azy raha toa ka mijanona ao amin’ny firenena, fara fahakeliny, andro nandritra ny alimanaka taona. Ny mpampiasa dia matetika handamina ny fisoratana anarana amin’ny teny rosiana ny hetra birao sy azo antoka ny fiarovana ara-tsosialy maro. Tena miasa ny mpiasa dia mila mandamina ny hetra fisoratana anarana sy ny rosiana amin’ny fiahiana ara-tsosialy maro ny tenany. Ny mpampiasa ihany koa ireo tompon’andraikitra deducting ny tsy maintsy vola karama avy amin’ny mpiasa sy ny fandoavana ny fanjakana. Tsy mba manao izany alohan’ny faha- ny volana manaraka vokatry ny roapolo isan-jato ho faty. Raha toa ka ny mpampiasa dia hita ho fisorohana ny hetra amin’ny fandraisana anjara amin’ny anaran’ny ny mpiasa, dia handoa onitra efa-polo isan-jaton’ny tontalin’ny vola. Mpiasa dia tsy voatery handoa ny anjara biriky amin’ny fiarovana ara-tsosialy ao Rosia, fa ny enta-mitoetra mafy ny mpampiasa, anisan’izany ny tena-miasa ny olona tsirairay (toy ny mpandraharaha, notaries ary mpisolovava) na olon-kafa mampiasa ny antoko fahatelo eo ambany ny asa ny fifanarahana. Avy amin’ny taona, ny rosiana hetra manam-pahefana — ny fa tsy ara-tsosialy vola — dia ho tompon’andraikitra amin’ny fitantanana indrindra ny fiahiana ara-tsosialy ny fandoavam-bola. Rosiana amin’ny fiahiana ara-tsosialy ny tahan’ny fandraisana anjara amin’ny taona azo zaraina ho ireto sokajy manaraka ireto: ankoatra izany, tsy maintsy loza fiantohana ny fandraisana anjara dia nandoa teo ny tahan’ny miainga avy amin’ny. dimy isan-jaton’ny mpiasa ny karama, arakaraka ny haavon’ny fanombanana mety ny mpiasa ny fibodoana. Izany dia aloa misaraka amin’ny etsy ambony anjara biriky amin’ny fiarovana ara-tsosialy, ary mbola administed ny ara-tsosialy ny vola. Amin’ny toe-javatra sasany rosiana ny filaminana ara-tsosialy dia mety ho afa-miala ohatra, ny fidiram-bola nahazo ny amin’ny vahiny mpiasa mpikarama eo ambanin’ny tena mahay mpifindra monina tetika dia mety ho afa-miala amin’ny fandoavana ny anjara biriky, na dia loza ny fandraisana anjara dia mbola ho tsy maintsy. Ny ankamaroan’ny vahiny ao Rosia, na izany aza, isan’izany ny firaisambe EOROPEANA ny olom-pirenena, dia ho foto-kevitra mitovy araka ny anjara biriky Rosiana olom-pirenena. Mba ho mitondra ny lohateny hoe ny rosiana tsy fananana asa soa, tsy maintsy ho efa mihoatra ny enina ambin’ny folo taona, afaka miasa, mavitrika mitady ny sahaza asa, ary tsy manana na inona na inona ny vola miditra na ny fisotroan-dronono ao Rosia. Any Moskoa, fampiharana ny tokony ho atao any amin’ny Departemantan’ny Mpiasa sy ny Asa ao Mosko, raha mila mitsidika ny akaiky indrindra Federaly Asa sy ny Asa Fanompoana raha toa ka miaina any an-kafa any Rosia. Mampihatra ny tsy fananan’asa ao Rosia dia tsy maintsy efa monina ao amin’ny firenena mihoatra ny andro na inona na inona -bolana ny fe-potoana sy ny famatsiana ny antontan-taratasy manaraka ireto: antontan-taratasy Rehetra ilaina amin’ny fomba ofisialy ny fanamarinana ara-panjakana — nanao sonia sy nanorotoro — ny antokon-draharaha namoaka azy ireo. Ireo izay tsy mbola nisy mpiasa ihany no mila pasipaoro sy ny taratasy fanamarinana ny fampianarana milaza ny haavon’ny hananan’ny tratra. Eo amin’ny fampiharana, ianao dia mijaly amin’ny indray-ny fanombanana ny fomba mba hanampy anao hahita tsara ny asa any Rosia. Raha toa ka mbola tsy manampy ny olona hahita asa, avy eo izy ireo ho voasoratra ho toy ny tsy an’asa, ary manan-jo handray rosiana ny tsy fananana asa soa ho ambony indrindra ny roa ambin’ny folo volana. Raha toa ianao ka mbola avy ny asa rehefa afaka roa ambin’ny folo volana, dia afaka reapply ho soa. Tsy fananan’asa ao Rosia dia matetika aloa isam-bolana, ary ny kajy amin’ny iray isan-jato lasa eo ho eo ny karama, izay mampihena mandritra ny volana no fe-potoana. Isam-bolana ny vola isan-karazany avy MANOSOTRA, sivin-jato arakaraka ny tahiry. Fianakaviana kely fidiram-bola ihany koa ny mitondra ny lohateny hoe ny fihenam-bidy amin’ny fanafody. Eo ambany rosiana asa lalàna, ny mpiasa dia manan-jo bebe kokoa ny fiarovana izay ny ankamaroan’ny firenena EORÔPEANA. Ny fiterahana ao Rosia dia tsara ohatra izany, amin’ny maha-bevohoka ny vehivavy amin’ny asa ny fifanarahana dia manan-jo andro noho ny fiterahana — fitopololahy teo anoloan’ny noho daty nahaterahana sy ny fitopolo andro post-fanaterana — sy mitondra ny lohateny hoe mandray zato isan-jato ny karama. Ao amin’ny hetsika ny aretina, na miteraka kambana sy ny triplets, ny isan’ny andro dia nitohy niakatra ho any amin’ny ambony indrindra ny andro. Rehefa mihevitra ny rosiana ny fiterahana, dia tokony ho tsaroana fa ny fitambaran’ny nilaza karama ny fandoavam-bola dia tsy tokony hihoatra ny MANOSOTRA. Fiterahana soa ihany koa omena ny mpivady izay manangana zaza iray eto ambany ity ny faha. Mamakia maromaro kokoa ao amin’ny habaky ny governemanta. Maro ireo fotoana iray, fiterahana tombontsoa fandoavam-bola ho an’ny vehivavy bevohoka eo ambanin’ny ny toe-javatra manaraka ireto: Tamin’ny taona, i Rosia fankatoavana ny fanavaozana rafitra fisotroan-dronono izay mahafaoka telo karazana ny fisotroan-dronono: fanjakana, tsy maintsy atao ny fibodoana ny fisotroan-dronono sy ny tsy miankina amin’ny fanjakana ny fisotroan-dronono. Ny tsy maintsy atao ny fisotroan-dronono valisoa ireo mpiasa ao amin’ny sokajy telo — taona, fahasembanana, sy ny sisa velona ny fisotroan-dronono. Alohan’ny dia manan-jo handray ny rosiana fisotroan-dronono, dia tsy maintsy efa nandray anjara tamin’ny maintsy Tahirim-bola Fisotroan-dronono ny Federasiona rosiana (PFR), fara fahakeliny, ny valo taona. Taorian’ny roa price miakatra amin’ny taona, ny antenimieram-pirenena ny fisotroan-dronono ao Rosia mijoro amin’ny MANOSOTRA, toy ny aprily izay hatao ny taona. Amin’ny taona teo aloha, ny eo ho eo ny fisotroan-dronono ao Moskoa dia tombanana eo amin’ny manodidina ny MANOSOTRA, sy MANOSOTRA, enin-jato ho St-Petersburg. Ny olona izay hampivelatra ny vokatry ny fahasembanana ankapobeny ny aretina, ny asa, ny ratra, ny asa na ny aretina ny miaramila asa dia manan-kilema fisotroan-dronono. Mba ho mendrika ny hahazo ny Fahasembanana ny Asa ny Fisotroan-dronono dia tsy maintsy efa ao amin’ny asa. Sisa velona ny fisotroan-dronono dia nomena: ny mpitondratena zokiko (na maty vady sy ray aman-dreny be taona kokoa noho ny) na tsy manana asa, ary ny fikarakarana ny zaza latsaky ny efatra ambin’ny folo, na ireo ankizy manan-kilema hatramin’ny valo ambin’ny folo taona dia rahavavy sy rahalahy valo ambin’ny folo taona sy ny ray aman-taona enim-polo sy na antitra na sembana. Fanampiny fisotroan-dronono dia aloa tsy ny fanjakana tsy miankina ny vola fisotroan-dronono. Mba ho tombontsoa tsy tokony hanao fifanekena amin’ny famatsiam-bola sy ho fandraisana anjara an-tsitrapo nandritra ny asa. Ho fampahalalana bebe kokoa momba ny karazana misy ny fisotroan-dronono ao Rosia sy ny zo soa, vakio ny Mpisolovava rosiana mpitarika ny rosiana rafitra fisotroan-dronono. Rosia dia heverina ho toy ny iray amin’ireo tsara indrindra amin’ny firenena mba hisotro ronono. Ny taona fisotroan-dronono ao Rosia ho an’ny lehilahy dia enim-polo sy ho an’ny vehivavy, na dia ireo taona no ho famerenana amin’ny taona. Ny firenena eo ho eo ny fisotroan-dronono ao Rosia amin’izao fotoana izao ihany koa dia mijoro ao amin’ny MANOSOTRA, efa-jato raha ao Moskoa ny eo ho eo ny fisotroan-dronono dia MANOSOTRA, ary ny MANOSOTRA, ho an’ny St-Petersburg. Ny Tahirim-bola Fisotroan-dronono ny amin’ny Federasiona rosiana efa ho, diman-jato isam-paritra ny birao ao amin’ny firenena. Hahita inona ny safidy sy ianao raha mitondra ny lohateny hoe ny rosiana fisotroan-dronono, vakio rosiana Mpisolovava mpitari-dalana amin’ny retiring any Rosia. Rosiana manampahefana hanao izany fanerena handoa ny fiantohana ara-pahasalamana ao Rosia ny rafitra fiahiana ara-tsosialy. Izany dia mamela ny olona rehetra ny fikarakarana ara-pahasalamana fototra fandrakofana asa vonjy taitra, ary maimaim-poana ny olona rehetra monina any Rosia. Ny kalitao ny fahasalamam-bahoaka ao Rosia dia ambany raha ampitahaina amin’ny hafa firenena mandroso ary tsy miteny anglisy dokotera, na dia misy maro ny tsy miankina ny fitsaboana foibe manome tolotra fitsaboana mitovy ny fenitra iraisam-pirenena. Hianatra bebe kokoa momba ny rosiana rafitra fiahiana ara-pahasalamana sy rosiana ny fahasalamana ny fiantohana amin’ny rosiana Mpisolovava ilaina mpitari-dalana. Ny vahiny mitsidika Rosia na mitoetra mandritra ny fotoana fohy dia mila manana tsy miankina travel fiantohana alohan’ny hidirana ao amin’ny firenena. Raha mikasa ny hijanona noho ny maharitra sy mangataka vonjimaika na maharitra visa, vahiny mponina ara-dalàna takiana mba hividy ny fiantohana ara-pahasalamana.
Ireo mpiasa vahiny dia afaka mandray soa avy amin’ny iray ihany fahasalamam-bahoaka ny fidirana ho ao an-toerana ny olom-pirenena. Afa-tsy maintsy fiantohana ara-pahasalamana, misy hafa karazana fiantohana ao Rosia, fa ireo dia tokony ho fantatry ny. Ohatra, orinasa fiantohana dia zava-dehibe raha toa ianao ka raharaham-barotra ny tompony. Politika handrakotra anao noho ny fiara, mpiasan’ny, vahoaka madio miaraka amin’ny fanorenana sy afa-po fiantohana. Raha mikasa hitondra fiara ao Rosia, dia takian’ny lalàna mba haka ny fiara fiantohana. Izany koa no tokony hatao mba manana fiantohana manokana mba handrakotra anao noho ny ratra ny tenanao sy ny hafa. Tokony handinika ihany koa ny an-trano fiantohana izay manarona ny afo, ny rano fahavoazana, ny halatra sy ny fandrobana, na fanofana ao Moskoa na mividy rosiana fananana. Amin’ny toe-javatra sasany, dia mety ho ny toe-javatra mahazo ny rosiana antoka. Ho an’ny tena manokana ny fiantohana, misy be dia be ny orinasa fiantohana mifanaraka amin’ny vahiny. Rosia lehibe indrindra ireo orinasa fiantohana dia ahitana Ingosstrakh, Rosgosstrakh sy Reso Garantiya.
Maro ireo fampianarana soa ao Rosia mendrika mijery
Ohatra, i Rosia no iray amin’ireo firenena vitsy izay manolotra maimaim-poana ny saram-pianarana ho an’ny teratany vahiny. Isan-taona, ny governemanta loka maro an’arivony rosiana ny vatsim-pianarana ny mpianatra iraisam-pirenena mikatsaka ny fianarana any Rosia. Araka ny nahaterahan ny zaza, rosiana zaza soa dia mandray karama avy amin’ny toe-javatra sasany, ohatra, ny fianakaviana kely fidiram-bola, ny zaza teraka raha ny ray aman-dreny dia ny fanompoana ny amin’ny maha-miaramila na ny ray aman-dreny momba ny fiterahana na ny fitaizan-janaka handao (na dia ny ray aman-dreny izay hiverina hiasa afaka mahazo vola kokoa hatramin’ny efa-polo isan-jato eo ho eo ny karama). Ambany dia ambany-fitadiavam-bola ny fianakaviana dia mety ho mitondra ny lohateny hoe ny hafa soa eo ambanin’ny toe-javatra sasany. Ny habetsaky ny loka ho mifototra amin’ny ny karama fanambarana noho ny teo aloha ny telo volana. Miaraka amin’ny olona ao amin’ny fahasembanana mahazo soa, tsy mahazo ny antoka ara-dalàna sy ara-pahasalamana soa
Fanafarana sy ny Fanondranana ao Rosia